Musharrixiinta Bachelor-ka ma la bixiyaa? Immisa Ay Kasbadaan? -
Bogga ugu weyn Musharrixiinta Bachelor-ka ma la bixiyaa? Immisa Ay Kasbadaan?
Musharrixiinta Bachelor-ka ma la bixiyaa? Immisa Ay Kasbadaan?
isha sawirka: insider.com
Jaceylka waxaa laga yaabaa in uusan wax qarash ah ku bixin, laakiin noqoshada Bachelor Nation tartame waa uu sameeyaa.
Xiddigaha Bachelor-ka iyo Bachelorette waxay guriga ku tagaan jeeg mushahar ah iyagoon iloobin lammaane nololeed oo suurtagal ah. Si kastaba ha ahaatee, ma helaan wax badan oo ku saabsan habka magdhowga lacageed.
Dhammaadka maalinta, jacaylku waa abaalmarinta weyn ee Bachelors si ka duwan saaxiibadiisa dhabta ah ee bandhigga telefishinka halkaasoo ay ku helaan lacag.
Waa kuwan waxa aan ka naqaanno inta lacag ee Bachelor-ka iyo tartamayaasha Bachelorette la siiyo.
Siraha casiir leh ee Bandhigga Bacheor
Inta aynaan guda galin waxa uu maqaalkani soo bandhigayo oo ah ka jawaabista su’aasha ah miyay qaataan tartamayaasha bachelor-ka, waxa aanu bixin doonaa xogo kooban oo ay tahay in dadka doonaya in ay tartanka galaan ay ogaadaan.
Waxay ballan qaadaysaa inay noqoto mid xiiso leh.
Akhri: 10 Siyaabood oo Fudud oo Lagu Bixin Karo Miisaanka 2022 -ka
1. Soosaarayaashu waxay mararka qaarkood ka dhigaan tartamayaasha inay xidhaan wax la mid ah
Wareysi uu siiyay Usbuucii Usbuucii Janaayo 2021, Demi Burnett, laga bilaabo xilliga 23 ee Bachelor The ayaa shaaca ka qaaday in soosaarayaashu ay mararka qaarkood sameeyaan tartamayaasha xirtaan dhar isku mid ah si ay u abuuraan riwaayad.
"Xilligeyga, Heather [Martin] iyo gabadhan Laura, waxay lahaayeen dhar isku mid ah," ayay tiri. "Soosaarayaashu waxay kuu sheegayaan midka ka mid ah dharka ay u maleynayaan inaad xirato. Markaa waxay u badan tahay inay rabeen inay wax kiciyaan.”
Wareysigan ayaa yimid ka dib markii laba tartame ee The Bachelor season 25 ay xidheen dhar cas oo isku mid ah.
2. Tartamayaasha Oo Joojiyey Shaqadoodii Si Ay Bandhigga Ugu Joogaan
Bachelor The iyo Bachelorette The filimka u dhexeeya lix ilaa sagaal toddobaad. Iyadoo laga yaabo in tani aysan ahayn waqti dheer in jacaylku dhaco, laakiin waa wakhti dheer in laga fogaado shaqada. Taasi waa sababta tartameyaal badan ay uga tagaan shaqadooda.
In kasta oo tartameyaal badani ay xirfadahooda ku bilaabaan saamaynta Instagram-ka, martigeliyayaasha podcast-ka, iyo qoraayaasha bandhiga ka dib, dhacdada hore ee meesha ka saaraysa kuwa aan haysan taageerada fursadahaas oo laga tago shaqo la'aan ka dib marka guriga loo diro.
Tartamayaasha Xiliga 11 JJ Lane ayaa muujiyay niyad jab isagoo leh, "Ma fahmin baaxadda bandhigga iyo sida ay u adag tahay in la helo shaqo dhab ah isla markaaba. Qof kastaa wuu garanayaa cidda aad tahay, loo-shaqeeyayaashuna waxay u arkaan inay tahay wax-ka-jeedin, "Xilliga 11-aad ee Bachelorette JJ Lane ayaa u sheegay Market Watch 2017.
Hoos waxaan kaga hadli doonaa jawaabta aadka loo sugayo ee su’aasha; tartamayaasha bachelor-ka mushahar ma helaan?
3. Tartamayaashu waa inay dhammaystiraan Imtixaanka STD, Baadhitaanka cilmi nafsiga iyo hubinta asalka
Tartamayaasha Bachelor-ka waa inay tijaabiyaan diidmada tijaabooyinka caadiga ah ee COVID-19 ka hor inta aan loo oggolaan inay dejiyaan.
Inta lagu jiro arjiga, tartamayaasha waa in ay ku aflaxaan baaritaan taariikheed oo ballaaran, baaritaanka STD, iyo baaritaan nafsi ah ka hor inta aan si rasmi ah loogu soo bandhigin bandhigga.
Horeba aqoon buuxda ayaa ah xaqiiqda ah in baaritaanka asalka inta badan uusan helin wax walba oo ku saabsan tartame, sida lagu arkay tartamayaasha taariikhda muranka dhaliyay ee hore.
Codsiga dhexdiisa, tartamayaashu waxay sidoo kale saxeexaan inay u oggolaadaan ABC inay sii daayaan macluumaad kasta oo ay ka bartaan iyaga oo u sii maraya dhinacyo saddexaad.
4. Qoys Dhab ah ayaa ku nool Guriga Bachelor-ka
Waan ogahay in tani ay la yaab ku noqon doonto. Qoyska dhabta ah waxay ku nool yihiin Guriga Bachelor-ka marka bandhiggu aanu duubin.
Gurigan oo lagu magacaabo "Villa De La Vina," waxaa iska leh nin lagu magacaabo Marshall Haraden iyo qoyskiisa, kuwaas oo ka guura guriga sannadkii laba jeer Bachelor The iyo Bachelorette The filimaan. Qoysku sidoo kale waxay ka guuraan alaabtoodii iyo alaabtoodii.
Qaybo ka mid ah guriga weyn ayaa sidoo kale diyaar u ah in lagu kiraysto munaasabadaha, markaa martigeli shirkaaga xiga ee shirkadda ama aqoon-is-weydaarsiga koox-dhiska.
5. Lammaanuhu waa inay wada joogaan ilaa 2 sano si ay u ilaashadaan giraanta Neil Lane
Faraantiga Neil Lane ayaa hibo u leh lamaane kasta oo u dambeeya Bachelor iyo Bachelorette haddii ay doortaan inay ku hawlanaadaan finalka.
Faraantiyadan ayaa ku kacaya hanti aad u badan, waana sababta uu u jiro qodob ku jira heshiiska lammaanaha. Waxay akhrinaysaa inay tahay inay wada joogaan laba sano oo isku xigta si ay u sii wadaan giraanta.
Haddii ay jabaan ka hor calaamada labada sano ah, giraanta waxaa lagu celiyaa Neil Lane.
Waxa kale oo waraysiga laga soo sheegay in lammaanaha laga mamnuucay inay iibiyaan faraantigooda ka hor dhammaadka labada sano, waana inay waydiistaan ​​ABC ogolaansho qoran haddii ay go'aansadaan inay sidaas sameeyaan.
Akhri: 13 Hackers oo Fudud oo ku Saabsan Sida Lacag looga Sameeyo Gabayada 2022
Tartamayaasha Bachelor-ka iyo Bachelorette mushahar ma helaan?
Tartamayaasha Bachelor-ka mushahar ma helaan? Akhri kan tartameye. Ha ka filan bamka lacagta akoonkaaga.
Tartamayaasha taxanaha xaqiiqada ABC ma helaan wax lacag ah oo qaarkood waxay qaadeen tallaabooyin dhaqaale oo xad dhaaf ah si ay uga soo muuqdaan bandhigga.
"Waxaan dib u daymiyay gurigayga, waxaanan ku qaatay wax la mid ah $8,000 dharka," hore "Bachelorette" Jillian Harris ayaa ku qoray barta blog-ka ee 2016.
Mid ayaa u malayn doona in bandhiga sida weyn u guulaystay Bachelor, waxaa lagu siin lahaa lacag aad u qurux badan wakhtigaaga si aan ku talagal ahayn adiga oo isku ceebeynaya malaayiin Maraykan ah hortiisa.
Sida ay soo baxday, ku noolaanshaha guri guri, u socdaalid meelo qurux badan, haysashada dalagga kali-kabka ah ee quruxda badan ee aan macquul ahayn waa abaalgud ku filan! Ugu yaraan, indhaha soo saarayaasha.
Intee le'eg ayaa la siiyaa tartamayaasha Bachelor?
Haddii aad ka soo muuqato Bachelor-ka ama Bachelorette waxba ma helaysid gabi ahaanba.
Runtii tartamayaasha qaar ayaa deyn lagu yeeshay si ay ugu diyaar garoobaan bandhiga, maadaama la filayo inay ka tagaan shaqadooda oo ay soo iibsadaan dharkooda labada bilood ee la duubayo.
Dumarka ayaa sidoo kale ku qasban inay sameystaan ​​timo u gaar ah iyo isqurxin, waxaana la qiyaasayaa in haweenka tartamaya ay qarash gareeyaan ilaa afar laab inta ragga.
ABC waxay siisaa labiska labada final ee u dambeeya qaybta u dambaysa.
In kasta oo kuwa doonaya aanay waxba ka samayn bandhigga, inta badan hogaamiyayaasha waxay sameeyaan ugu yaraan $100,000 si ay xiddig ugu noqdaan Bachelor ama Bachelorette xilli.
Hogaamiyeyaasha qaar ayaa sidoo kale ka dhigaya wax badan haddii ay leeyihiin xirfado gorgortan oo heer sare ah, sida xilli 8 Bachelorette Emily Maynard oo la siiyay $250,000 waqtigeeda bandhigga.
Leads sidoo kale waxay helayaan maro bilaash ah inta ay ku jiraan bandhigga, waxayna leeyihiin stylist ka caawiya inay farsameeyaan muuqaalkooda. Waxay sidoo kale helayaan in ay haystaan ​​dharka dhamaadka xilligooda.
Maxaad ugu biirtay Bandhigga Bachelors| Lacag ma heshaa?
Ka dib markii ay ka soo muuqdaan bandhigga, labadaba hogaamiyaasha iyo tartamayaasha waxaa lagu soo qaadaa bandhigyo bandhig hadal ah, xayeysiisyo Instagram, iyo kafaala-qaadid, waxayna bixiyaan si ay u muujiyaan bandhigyo kale oo xaqiiqo ah.
Qaar badan oo ka mid ah tartamayaasha Bachelor iyo Bachelorette ayaa sidoo kale abuuray podcasts ka dib markii ay ka soo jeedaan ABC, waxayna ka helaan kharashka xayeysiiska.
Intaa waxaa dheer, qaar ka mid ah tartamayaasha ayaa mar dambe ka soo muuqan doona Bachelor-ka Jannada, waxayna ka helaan meel kasta $7,000-15,000 xilli ciyaareedkii.
Akhri: Siyaabaha ugu Wanaagsan ee Lagu Bixiyo Si Loogu Qoro Faallooyinka Amazon 2021
Halka xiddigaha Bachelor-ka iyo Bachelorette ay guriga ku tagaan jeeg mushahar ah iyaga oo aan iloobin lammaane nololeed oo suurtagal ah. Si kastaba ha ahaatee, ma helaan wax badan oo ku saabsan habka magdhowga lacageed.
Waxaan rajeyneynaa inaad ku riyaaqday akhrinta maqaalkan oo aad heshay jawaabta su'aalahaaga ku saabsan inta ay le'eg tahay mushaharka tartamayaasha bachelor-ka. Noogu reeb faallo sanduuqa hoose haddii ay jiraan su'aalo kale.
GO NIDAALKA GANACSIGA NIGERIA - HORUMARINTA WAXYAABAHA NIGERIAN
Carwada ganacsiga ee GO NIGERIA waa xaflad heer qaran ah oo ay soo qaban qaabisay Ururka Ganacsatada Titan (ATE). Tani…
Barnaamijyada sida Kik: 10 Barnaamijyada Rasuulka Beddelka ugu Fiican sanadka 2022
Waxaa jira farriimo badan ama barnaamijyo sheekaysiga halkaas, laakiin badanaaba barnaamijyadan uma eka…
21 -ka Shirkadood Ee Ugu Sarreeya Shiinaha Oo Maalgashanaya | Xogta 2022
Maalgelintu way qurux badan tahay marka ay si sax ah u soo baxdo, waana laga yaqyaqsadaa marka ay si ballaadhan uga soo baxdo calaamadda.…
Sida Loo Qoro Iimayl Mahadsanid Kadib Waraysigaaga (Muunadaha ku lifaaqan)
Waxaad la kulantay shaqaaleeyaha, waxaad ka jawaabtay daraasiin su'aalo oo cusub, waxaadna horay u weydiisay labo ka mid ah kuwaaga…
43 Xigasho Awood leh oo Ku Saabsan Geesinimada iyo Geesinimada sanadka 2022
Geesinimada ka timaada erayga “geesi” micnaheedu waa geesinimo, sida uu qabo qaamuuska Merriam-Webster macnaheedu waa “tayada ama…